OFFICIAL ICS 4.0.4 (4.1.B.0.587)FOR SONY XPERIA ARC S INSTALLING & ROOTING GUIDE – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
iExplorer 3.2.1.4 For Mac Os X 16.5 MB Tower Defense 1.3.5 Game For Mac Os X 30MB ImTOO iPhone Apps Transfer 1.3.1 For Pc Wondershare MobileGo for Android 3.2.0 For Pc 25.49 MB Smarth Stay EX(Do Not Buy)-v.1.0.4 For Android(642Kb) Home
Published On: Sun, Aug 19th, 2012 Android Tutorials / Android ဖုန်း root လုပ်နည်းများ | By ကုိုမျိုး OFFICIAL ICS 4.0.4 (4.1.B.0.587)FOR SONY XPERIA ARC S INSTALLING & ROOTING GUIDE
Update ထွက်ရှိလာတဲ့ XPERIA ARC S ICS 4.0.4(4.1.B.0.587) တင်နည်းလေးကို MMAS မှ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
BUILD NUMBER က 4.1.b.0.587 ဖြစ်ပြီး ANDROID VER ကတော့ 4.0.4 ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ လိုအပ်တာတွေ အရင်ဒေါင်းကြမယ်ဗျာ။
LT18i_4.1.B.0.587_(1254-2184).7z << PASSWORD >> MMAS<<<
FLASH TOOL VER 0.9.0.0
>>>>>>>>>> First Step ! <<<<<<<<<<<
Flashtool ကို Install လုပ်ပါ။
Down လို့ ရလာတဲ့ LT18i_4.1.B.0.587_(1254-2184).7z ဖိုင်ကို zip ဖြည်လိုက်ပါ ရလာသော LT18i_4.1.B.0.587_(1254-2184).ftf ဖိုင်ကို Flashtoolfirmwares ဆိုတဲ့ဖိုဒါမှာ ထည့်ပေးထားပါ။
Flashtoolfirmwares ဖိုဒါ မရှာတတ်ဘူးဆိုရင် ခုဏ Install လုပ်ထားတဲ့ Flashtool တင်တဲ့နေရာမှာ သွားကြည့်ပါ။
ကဲ စပြီးတင်စို့ ….ဖုန်းကို Power off လိုက်ပါ။Usb နဲ့ ကွန်ပျူတာ တွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြိုးအဆင်သင့် ရှာထားပါ…
ထို့ နောက် Flashtool Driver Install လုပ်ပါမယ်။ C:Flashtooldrivers ထဲက Flashtool-driver.exe ကို Install လုပ်ပေးပါ ။
အောက်ပါပုံမှပြထားသော နေရာအားလုံး အမှန်ချစ်အကုန်ချစ်ပေးပါ။ထို့ နောက် Install လုပ်ပါ။
COMPUTER ကို RESTART လုပ်ပါ။
ထို့ နောက် FLASHTOOl ကို RUN လိုက်ပါ ။
Flashtool ကို Run ပါ>>>>>>
box သေးလေး ပေါ်လာ လျှင် ok ပေးလိုက်ပါ။
ဒီပုံလေးထဲကအတိုင်း မှန်ကန်အောင် ရွေးချယ်ရပါမယ်………ပီးရင် Ok နှိပ်ပါ ….ဒါဆို ရင် မိမိ တို့ ဖုန်းနဲ့ဘယ်လို ချိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့Box လေးတခုတက်လာပါလိမ့်မယ်…
သူပြထားတဲ့အတိုင်းလုပ်နော်……အဲဒီအဆင့်မှန်ပီ ဆိုရင်တော့ စတင်ပီး Firmware တင်နေပါပီ
FLASHING FINISH ဆိုတဲ့ စာသာလေးတက်လာပီ ဆိုရင်တော့ ဖုန်းကို USB ကြိုးဖြုတ်ပြီး Power ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ။
SONY LOGO လေးတက်လာပီးနောက် Os installing အနဲငယ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးနောက် ICS 4.0.4 လေးတက်လာတာကို သင်မြင်တွေ့နိုင်ပါပြီ။
SETTING>>SECURITY>>UNKNOWN SOURCES ကို အမှန်ချစ်ပေးပါ။
SETTING>>DEVELOPER OPTIONS>>USB DEBUGGING ကိုလဲ အမှန်ချစ်ပေးထားပါ။
ဒါဆို ICS တင်ပြီးတဲ့ အနေအထားရောက်ပါပြီ။
ROOT အတွက် Bootloader Unlocked ဖြစ်နေရပါမယ်။
SUPER USER ROOT.zip
Fastboot ဖိုဒါ ကို ဖွင့်ပါ ။
boot_587.img ကို Fastboot ဖိုဒါထဲထည့်ပါ။
SUPER USER ROOT.zip ကို zip မဖြည်ပဲ SD CARD ထဲထည့်ပါ။
Flash.cmd ကို RUN လိုက်ပါ CMD တခုတက်လာပြီး WAITING FOR DEVICES ဆိုပြီး တက်လာပါမယ်။
ထို့ နောက် Power off ထားသော ဖုန်းအား MENU KEY ကိုဖိလျှက်Usb ကြိုးနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။Command Prompt ဆက်လက် အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ တို့ နောက် ဖုန်း ဖွင့်လိုက်ပြီး ပြန်တက်လာ တာနက်တပြိုင်နက် back key ကို နှိပ်လိုက် လွက်လိုက်လုပ်ပေးပါ (Recovery Mode မတက်မခြင်း)။
ထို့ နောက် Install zip from Sdcard >>Choose zip from sdcard မှတဆင့် မိမိ တို့ ထည့်ထားသော SUPER USER ROOT.zip
ကိုရွေးပေးလိုက်ပြီး Install လုပ်လိုက်ပါ။ထို့ နောက် Reboot System now ကို နှိပ်လိုက်ပါ..။
ကဲဒါဆိုရင်တော့ Official 4.0.4 ARC S လေး ROOT ပြီးပြီပေါ့ဗျာ. အဆင်ပြေကြပါစေ
ကုိုမျိုး - Related News
10 comments on “OFFICIAL ICS 4.0.4 (4.1.B.0.587)FOR SONY XPERIA ARC S INSTALLING & ROOTING GUIDE”	moe thar on November 2, 2012 at 4:19 am said:
Flashtoolfirmwares ဆိုတဲ့ဖိုဒါက ရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ် C:/Flashtool/firmwares နဲ့ရှာတာလဲ မရဘူး C: ထဲမှာလဲ Flashtoolfirmwares မတွေ့ဘူး ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ ပြောပါဦး
Reply ↓	icon on November 3, 2012 at 4:46 am said:
Sony xperia U root နဲ့ICS ကို ဘယ်လိုတင်ရမလဲ မသိလို့သိရင်ပြောပြပေးပါ ။
Reply ↓	Than Htike on November 25, 2012 at 4:28 pm said:
sony ericsson xperia lt18a မှာကောရလားအကို
Reply ↓	oakkar on January 17, 2013 at 1:11 pm said:
xperia ray မှာကော ရလား ??????
Reply ↓	bargyi on January 27, 2013 at 10:03 am said:
sony xperia tx ကိုဘယ်လို root လုပ်ရမလဲပြောပြါအုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply ↓	DG on March 3, 2013 at 6:46 am said:
PASSWORD က CAPT လား SMALL လား DO NOT MATCH ပဲပြနေလို့
Reply ↓	jhon on April 10, 2013 at 1:19 am said:
password က MMAS ပါ bro.Capt ပါ.။
Reply ↓	nay lin on March 9, 2013 at 11:19 pm said:
sony ericsson arc s မှရောရလားအစ်ကိုမြန်မြနန်လေးဖြေပေးပါနော်
Reply ↓	bwarnge on April 8, 2013 at 2:08 am said:
build number မတူလည်း၇လားအကို sony xperia arc s ပဲရလား
Reply ↓	sittmhan on May 3, 2013 at 4:39 pm said:
Bootloader Unlocked ကို ဘယ်လိုလုပ်ရလဲခင်ဗျာ
Aung Lay on Conferendo videochat for androidmg kyaw on How to Install Myanmar Font On Samsung Galaxy S4-i9500 & i9505-(Without Rooting)Hein Maung on Y210 B829 root toolngelay on Y210 B829 root toolngelay on Y210 B829 root tool Android Development